कार र घरमा कुन पहिला किन्ने, यसरी गर्नुस् निर्णय
6:05 am, शुक्रबार, फाल्गुन २, २०७६
काठमाडौं । मानिसका आवश्यकता असिमित हुन्छन्, हरेक मानिसले आफ्नो व्यवसायीक जिवनको सुरुवात गर्दा पहिलो आवश्यकता घर वा कार के हुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्दैन ।
हुन पनि मानिसको पहिलो आवश्यकता मोविलिटीको लागि कार र बस्नको लागि घर हुने गर्छ । त्यसमा कुन पहिला आवश्यक हो भन्ने छुट्टाउन कठिन हुने गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा लैङ्गीक हिसावले पनि मानिसको आवश्यकता फरक हुने गरेको पाइन्छ । विशेषत महिलाहरु पहिला घर हुनु पर्ने विचार राख्छन् भने पुरुषको रोजाइमा पहिला कार हुने गर्छ ।
लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने भविष्यमा मूल्य वृद्धिसँगै घरमा गरिएको लगानीले उच्चतम प्रतिफल दिनसक्छ । तर, तपाईं प्रोफेशनल क्यारियरमा हुनुहुन्छ भने डिप्रिसेशन नै हुने भए पनि कारको आवश्यकता धेरै हुनसक्छ । त्यसैले पहिला कुन किन्ने भन्ने विषय आर्थिक हिसावले निकै पेचिलो बन्न सक्छ ।
तलका केही प्रश्न हेरौं ?
-तपाईंसँग ४० लाख रुपैयाँ छ ?
-कुनै पुरानो कार १० लाख रुपैयाँमा आउँछ ?
-तपाई ऋणमा कार किन्न चाहनुहुन्छ ?
-तपाईं भाडाको घरमा बस्दै आउनु भएको छ ?
-तपाईं २५ लाखभन्दा सस्तो कार किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ ?
-तपाईं पहिलोपटक घर किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ ?
-तपाईंले किन्ने घर १ करोड रुपैयाँ हाराहारीको हो ?
-त्यसमा कति प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्ने विचार गर्नुभएको छ ?
यी प्रश्नहरूको उत्तर तपाई आफैले दिनुभयो भने तपाईं आफैँ निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ, पहिला के किन्ने ? आफ्नो आर्थिक क्षमताले के खरिद गर्न भ्याउँछ ।
अब केही तथ्यगत कुरा गरौं । तपाईंले किन्ने कारले तपाईंको उत्पादकत्व कति बढाउँछ ? त्यसलाई मासिकरुपमा कति खर्च गर्नुपर्छ ? जस्ता विषयले तपाईंको निर्णय के हुने भन्ने निचोड निकाल्छ । यदि तपाईंको कारको खर्च तपाईंको आम्दानीभन्दा बढी आयो भने तपाईंलाई कार किन्नु भारी पर्न सक्छ ।
सुरुवाति २ वर्षमा पहिला घर किन्ने निर्णय धेरैका लागि स्मार्ट हुनसक्छ । तर, पूर्ण प्रोफेशनल जीवनमा रहेका मानिसले घर वा कार रोज्नुपर्यो भने आफ्नो आवश्यकतालाई छुट्याउन सक्नुपर्छ ।
यदि तपाईंले तिर्दै आउनु भएको मासिक भाडामा घर किनेपछि निकै ठूलो वचत हुने अवस्था छ भने तपाईं पहिला घर किन्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा बीमा, करलगायतका खर्च जोड्दा तपाईं बसेकोभन्दा घर किन्नु निकै महंगो भयो भने तपाईंको घर किन्ने निर्णय उल्टो पर्न सक्छ ।
तपाईंले सुरुमा घर किन्ने निर्णय गर्नुभयो भने अबको कति समयपछि कार किन्न सकिन्छ भन्ने प्लान गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक डाउनपेमेन्टको व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
यदि कुनै घर किन्ने अचानक प्रस्ताव तपाईंलाई आयो भने त्यस क्षेत्रमा कति मूल्यमा घर किनबेच भइरहेको छ । मूल्य बढ्दो वा घट्दो कुन ट्रेन्डमा रहेको छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । यदि घरमा गरिएको लगानीमा डिप्रिसिएट हुने अवस्था आयो भने तपाईंको निर्णय खराब हुनसक्छ ।
यी सबै कुरा विचार गरेर पनि तपाईं घर किन्ने निचोडमा पुग्नुभयो भने तपाईंले पुरानो कार र नयाँ घर किन्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसपछि तपाईंको आम्दानीअनुसार निश्चित समयपछि नयाँ कार किन्नु उपयुक्त हुन्छ ।
कारको मर्मत सम्भारमा धेरै लागत लाग्ने अवस्था आयो र तपाईंले घरसमेत जोडिसकेको खण्डमा पुनः फाइनान्सको व्यवस्था गरेर नयाँ कार लिन उपयुक्त हुन्छ ।
अन्त्यमा सुरुवाति २ वर्षमा पहिला घर किन्ने निर्णय धेरैका लागि स्मार्ट हुनसक्छ । तर, पूर्ण प्रोफेशनल जीवनमा रहेका मानिसले घर वा कार रोज्नुपर्यो भने आफ्नो आवश्यकतालाई छुट्याउन सक्नुपर्छ । माथि भनिएका कुराअनुसार तपाईंको आवश्यकता के हो त्यहीअनुसार निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
लकडाउनमा धेरै दिन कार थन्काउन परे यी ५ काम गर्नुहोस्
कार तथा मोटरसाइकलको कुन-कुन पार्टसमा कोरोना भाइरसको जोखिम
यी फिचर छैनन् ? यस्ता गाडी नकिन्दा वेस !
गाडी चलाउँदा पेट्रोल बचाउने ५ तरिका
माइलेज पत्ता लगाउने ६ तरिका, बढी माइलेज पाउन के गर्ने ?